Bụrụ China Medical Fabric agbazekwa fụọ na-abụghị kpara akwa igwe / nonwoven ákwà na-eme ka igwe si Germany / na-abụghị kpara ákwà na-eme ka igwe factory na-emepụta |HRF
Igwe na-ahụ maka ahụike gbazere igwe na-abụghị nke akwa akwa / akwa na-abụghị nke na-emepụta igwe sitere na German / igwe anaghị kpara akpa
Ngwá ọrụ akwa gbazere agbaze nwere arụmọrụ arụ ọrụ kwụsiri ike, mkpụrụ dị elu na arụmọrụ dị elu.Mmepụta nke akwa akwa na-abụghị nke nwere uru nke itinye ntupu edo edo, ike dị mma, ikuku ikuku dị mma na enweghị ụtọ, nke na-ezute ụkpụrụ nchebe gburugburu ebe obibi.
The akụrụngwa nke meltblown ákwà mmepụta akara bụ nke PP ịghasa extruder, gbazee nzacha, gbazee pipeline na metering, agbaze ịfụ eri isi, ikuku kpo oku usoro, na-arụ ọrụ n'elu ikpo okwu, crawler nnata, drum nnata, adịghị mma nrụgide suction usoro, pneumatic akara usoro na mmepụta. usoro akara akara.
dayameta ịghasa 120mm
Ihe mkpuchi gbọmgbọm 38CrMoAlA
Nitriding omimi 0.4-0.7mm
Isi ike nke elu > 980HV
Ọsọ skru kacha 75r / min
Ike moto 90KW
Ụzọ kpo oku Igwe ọkụ eletrik, kpo oku seramiiki
Ike ikpo ọkụ 6 mpaghara
Ọnọdụ ikuku jụrụ oyi eke obi jụrụ
Igbe igbe Hard gear reducer na elu nnyefe ziri ezi na akpaaka mmiri jụrụ ngwaọrụ
Ụdị ọrụ nke moto isi mbanye
AC moto, njikọ njikọ na-agbanwe agbanwe
njikwa ntụgharị ugboro ugboro
Nweta nkwuputa ugbu a !!!
Wuxi Hai Roll Fone Science and Technology Co., Ltd., ọkachamara na mmepụta nke ihe nkpuchi akụrụngwa na-emepụta ihe, N'ihe karịrị afọ 20 nke mmepụta akụkọ ihe mere eme na ụlọ ọrụ.Ngwá ọrụ anyị enwetala ọtụtụ akwụkwọ ikike, gụnyere ngwaahịa 4 patent na ngwaahịa 3 dị elu.Anyị nwere ndị ọkachamara ọkachamara 20, yana ndị ọkachamara nrụnye na ndị injinia na-arụzi ọrụ na Italy, Turkey na Korea na-ahụ maka ntinye na mgbe irechara igwe nkpuchi.Ụlọ ọrụ anyị bụ ngwá ọrụ ịzụrụ ngwá ọrụ maka nnukwu ụlọ ọrụ dị elu na ụlọ na mba ọzọ.A na-ebupụ ngwaahịa ụlọ ọrụ na ihe karịrị mba 50 gburugburu ụwa ma ndị ahịa nabatara nke ọma.
1.Does otu igwe nwere ike ịmepụta otu nha?
Ọ bụghị kpọmkwem, ọ dabere na igwe.
2. Ị nwere nkwado mgbe-ahịa?
Ee, anyị nwere obi ụtọ inye ndụmọdụ ma nweekwa ndị ọkachamara nwere nkà dị maka ijikwa igwe ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
3. Kedu ka esi eleta ụlọ ọrụ gị?
Anyị nwere ike iburu gị n'ọdụ ụgbọ elu Shanghai ma ọ bụ Hangzhou.Ma ọ bụ ọdụ ụgbọ oloko Shaoxing North.
4. Kedu ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na igwe agbajiri agbaji?
Oge ikike nke igwe anyị bụ ọnwa 12.ọ bụrụ na akụkụ ndị gbajiri agbaji enweghị ike ịrụzi, anyị nwere ike izipu akụkụ ọhụrụ iji dochie akụkụ ndị gbajiri agbaji, mana ịkwesịrị ịkwụ ụgwọ awara awara n'onwe gị.ma ọ bụrụ na mgbe akwụkwọ ikike oge, anyị nwere ike site na mkparita uka maka idozi nsogbu, na anyị na-enye nkwado teknụzụ maka ndụ niile nke akụrụngwa.
5.Ị nwere ike ibu ọrụ maka njem?
Ee, biko gwa anyị ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ adreesị ebe ị ga-aga.anyị nwere ahụmahụ bara ụba na njem.6. 6.Ị bụ ụlọ ọrụ ahia ma ọ bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe?
Anyị bụ onye nrụpụta.
7. Gịnị mere ọnụ ahịa gị ji dị elu karịa ndị ọzọ?
Dị ka anyị na-anọgidesi ike na nke ọ bụla factory kwesịrị itinye àgwà na mbụ.Anyị na-etinye oge na ego n'ịzụlite otu esi eme igwe na-akpaghị aka, nke ziri ezi na nke dị elu.Anyị nwere ike ijide n'aka na igwe anyị nwere ike iji ihe karịrị afọ 20 na-enweghị nsogbu ọ bụla.
8. Ị nwere ndị injinia si mba ofesi?
Ee, ọ bụghị naanị na anyị na-enye ndị injinia si mba ofesi kamakwa anyị na-enye ọzụzụ nka.
9.Ị na-enye ahaziri?
N'ezie, anyị nwere ike ịmepụta akụrụngwa dịka data nke ngalaba nhazi ị na-enye.Anyị bụ ndị ọkachamara mpempe akwụkwọ metal akpụ igwe mmebe na emeputa.
Nke gara aga: Igwe na-eme akwa na-agbaze agbaze ọhụrụ nwere ọnụ ala dị ala / nkpuchi igwe akwa agbaze agbaze / igwe akwa agbaze agbaze
Osote: Ọgwụ mgbochi nke a na-atụfu ọkara akpaaka n'èzí ntị loop mgbochi uzuzu N95 igwe na-eme ihe mkpuchi ihu
Anyị nwere ike iburu gị n'ọdụ ụgbọ elu Shanghai ma ọ bụ Hangzhou.Ma ọ bụ ọdụ ụgbọ oloko Shaoxing North.4. Kedu ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na igwe agbajiri agbaji?
Ee, biko gwa anyị ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ adreesị ebe ị ga-aga.anyị nwere ahụmahụ bara ụba na njem.
6. Ị bụ ụlọ ọrụ ahia ma ọ bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe?
7.Gịnị mere ọnụ ahịa gị dị elu karịa ndị ọzọ?
9. Ị na-enye ahaziri?
Igwe na-eme agbaze agbaze akwa na-adịghị akwa maka ime mkpuchi ahụike
Igwe na-agbaze mkpuchi na-adịghị akwa akwa
Igwe anaghị ekpuchi ihu igwe na-eme ihe
Igwe anaghị arụ ọrụ maka igwe eji eme mkpuchi
Igwe eji eme akwa anaghị akpa
Igwe eji akwa mkpuchi anaghị kpara akpa
Ihe mkpuchi na-adịghị kpara akpa na-eme igwe dị ọnụ ala
Igwe na-eme ihe mkpuchi anaghị kpara akpa
Igwe eji akwa akwa anaghị akwa anụ
Igwe na-eme akwa na-adịghị akwa PP
Igwe na-eme akwa na-adịghị akwa PP Meltblown
Pp-Meltblown-Ihe eji eme akwa-ejighi akwa
Igwe na-eme akwa agbaze agbaze ọhụrụ nwere...